Howlgal xooggan oo ka socda koofurta gobolka Galgaduud | KEYDMEDIA ONLINE
Howlgal xooggan oo ka socda koofurta gobolka Galgaduud
Howlgallo xooggan oo billawday labo todobaad ka hor, ayaa Kooxda Al-Shabaab looga saaray degaanno ay maamulayeen in ka badan toban sano, koofurta iyo bariga Magaalada Dhuusamareeb.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya – Taliska qeybta 21-aad ee ciidanka xoogga dalka, booliska Turkigu tababaray ee Haramcad iyo ciidamada Daraawiishta Galmudug, ayaa iska kaashanaya dagaal adag oo Kooxda Al-Shabaab looga saarayo degmooyinka bari iyo koofureed ee gobolka Galgaduud.
Dagaallo xooggan oo socday in ka badan toban maalin ayaa Al-Shabaab looga saaray fariismo muhiim u ahaa 10-kii sano ee la soo dhaafay, sida, Labi-Dulle, Dhabane-Dhulkuhays, Sinadhaqo iyo kuwo kale.
Ilo xog ogaal ah, ayaa sheegay in Al-Shabaab galabta isaga baxeen deggaanka Ceel-lahelay, oo hoos taga degmada Ceelbuur, kadib culeyska kaga yimid ciidamada uu hor ka cayo Janeraal Mascuud.
Qoraal ka so baxay, taliska qaybta 21-aad CXDS, ayaa lagu yiri, “Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa kusii durkaya Magaalada Ceel-laheley ee Gobolka Galgaduud oo iminka ujirta wax ka yar 20KM, waxaana fariisimihii ay daganaayeen isaga guurey maleeshiyaadka Alshabaab oo ogaadey in aysan u babac dhigi karin awooda ku wajahan Degaannada ay joogaan ee Gobolka Galgaduud”.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoor-qoor’, Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi iyo Madax kale ayaa dhawaan ku dhawaaqay guluf dagaal oo degaannada maamulkaas looga xoreynayo Al-Shabaab.
Howlgalkaan ayaa loo istaagay kadib markii Kooxda Al-Shabaab ay dhowr habeen Hoobiyayaal la dhacday caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo la xoreyay 10 sano ka hor.
Sida uu KON, u xaqiijiyay Sargaal ka tirsan Taliska 21-aad ee Ciidanka xoogga, qorshaha duullaankaan ayaa ah xoreynta guud ahaan demooyinka iyo degaannada Bari iyo Koofureed ee Maamulka Galmudug, waxayna ciidamadu garabka ugu weyn ka helayaan dadka shacabka ah, iyadoo maanta gurmad raashin iyo agab ah oo ay direen Baarlamaanka Galmudug la gaarsiiyay furimaha hore ee dagaalka.